Jeneraal Xuud oo Caawa kulan qaadanaya Fahad Yaasiin | KEYDMEDIA ENGLISH
Jeneraal Xuud oo Caawa kulan qaadanaya Fahad Yaasiin
Generaal Xuud oo maalmahaan ku sugnaa magaalada Muqdisho, ayaa kulankiisi 1-aad caawa la qaadan doona Fahad Yaasiin, oo ay muddo ku kala aragti duwanaayeen siyaasadeedda gobolka Hirran.
MUGDISHO, Soomaliya – Ilo xog-ogaal ah ayaa sheegaya in General Abuukar Xaaji Warsame [Xuud], oo muddo dheer dagaal kula jiray Maamulka Hirshabeelle, isla-markaana dhawaan laga soo dajiyay caasimadda uu caawa kulan la qaadan doono agaasimihii hore ee NISA, eedeysame, Fahad Yaasiin.
Sida ay Keydmedia Online hore u baahisay, MW Hirshabeelle, Cali Guudlaawe ayaa kadib shirkii Golaha Wadatashiga ee soo gabagaboobay 9 Janaayo 2022, ku wargaliyay Fahad Yaasiin, in haddii uu doonayo kursiga Golaha shacabka ee HOP86, uu u doonto degaan doorashadiisa oo ah Baladweyne.
Is-baddelka mowqifkii hore ee Guudlaawe, oo ahaa in kursiga doorashadiisa loo soo raro Jowhar, ayaa kooxda waqtigu ka dhamaaday ku qasabtay in ay la heshiiyaan Gen. Xuud, kaas oo muddo dheer oo dagaal ah kadib, caawa kulan la qaadan doona Fahad Yaasiin.
Xuud, waxaa loo ballan qaaday in la siin doono lacag xooggan oo uu ku raadsado kursi Xildhibaan, isla-markaana helidda kursigaas ay ka gacan siin doonaan Kooxda Farmaajo iyo MW ku xigeynka Hirshabeelle, sidoo kale, waxaa loo ballan qaaday deganaansho Turkiga ah, iyo lacag xooggan oo uu isga furfuro Jabhaddii uu isku dibbariday.
Xogaha ugu danbeeyay ee la xariira Xuud, ayaa sheegay in xalay xilli danbe la geeyay Madaxtooyada, halkaas oo kulan waqtigiisu gaabnaa uu kula qaatay Madaxweynihii hore Farmaajo.
Dhawaan La-taliye sare, Cabdikariin Nuur Xasan [Doob-yare] oo ka mid ah shaqsiyaadka aadka ugu dhow Guudlaawe, ayaa Villa Soomaaliya dusha u saaray guud ahaan dhibaatooyinka Hiiraan, wuxuuna xusay in Farmaajo iyo Kooxdiisu diiddan yihiin in MW Hirshabeelle tago Baladweyne.
Wuxuu xusay in Maamulka Hirshabeelle uusan waxba kala socon wada-hadallada General Xuud, lagu geeyay Muqdisho, wuxuuna la yaab ku tilmaamay in sarkaalkii muddada dheer sheegayay inuu u taagan yahay xuquuqda ka maqan reer Hiiraan uu ugu danbeyn ku saf noqdo koox waqtigii ka dhamaaday.